अहिले मलाई त्यो गर्ने बानी परिसक्यो ! कोहि छ ? – Sidha Post 24
म आठ कक्षामा पढ्थे । १२ वर्षको थिए । पढाइमा तेज अनि सबैको मिल्ने साथी थिएँ। मेरो घरमा एक जना दाइ पढ्नको लागि डेरा गरेर बस्नु हुन्थ्यो। १० कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो । घरमा ड्याडीममी नहुँदा सधै त्यो दाइ मेरो कोठामा आएर बस्नुहुन्थ्यो ।
मलाइ उहाँको त्यो बानी राम्रो लाग्दैनथ्यो । एक दिन आएर मलाई उहाँले से-“क्स ग”-रम न भनेर सिधै भन्नुभयो । ड-र लाग्यो । मेरो मि-“न्स हु” न सुरु भएको वर्ष दिन भइसकेको थियो ।
स्कुलमा केटी साथीहरुबीच से-“क्सु-अ”-ल कुराहरु हुने गर्थ्यो, से-“क्स-ला-“ई असामान्य रुपमा कुरा गरिने हुँदा, दाईको प्रस्तावले म आ-त्ति-ए । सिधै हुँदैन भने ।
केही दिनसम्म केही भन्नु भएन । स्कुलबाट फर्केपछि र बिदाको दिनहरुमा पनि बेलुका नभइ घरमा ड्याडी ममी नहुने र दिदी पनि मामाघरमा बसेर पढ्ने भएकाले म एक्लै भएको फाइदा उठाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यो दाइ । अब मेरो कोठामा आउ-जाउ झनै बढेको थियो।
म त्यो बेला पालती थिए । मे’रो छा-ती पु-“ष्ट भ”एपनि अहिलेको जस्तो ठूलो थिएन । गर्मी ठाउँ भएकाले घरमा बस्दा लामै भएपनि स्क-“र्ट मा” त्र लगाइन्थ्यो । केही दिन पछि दाइले नजिक आएर मेरो स्त-“न छु”-नु भयो ।
म डरले पर ह-टे अ-नि त्यसो नगर्न भने। दाइले किताबमा पढेको, यसलाई राम्रो बनाउन मैले जानेको छु, यो राम्रो भयो भने तिमीलाई सबैले मन पराउँछन् भन्दै मलाई फकाउन थाल्नु भयो ।
दाइले अनेक गरि फकाए पनि मैले सुनिमात्र रहे, मैले केही ग-र्न दि-इ-न । दिन बित्दै गए अनि दाइका यस्ता कुराहरु सामान्य लाग्दै गए, अनि विस्तारै दाइले मे-रो श-रि-“र-मा हा”-त लगाउन थाल्नु भयो ।
म दाइको कुरामा ल “ठ्ठिन था” ले। जवानीको र-“स आ”-उन थालेकी एउटी १२ व “र्षकी के” टीलाई फ-का-उन के नै गा-ह्रो हुन्छ र, त्यो पनि आफुभन्दा ३ वर्ष जेठो के “टो ज” सलाई यस्ता से-“क्सु-अ”-ल कुराको बारेमा बढी थाहा हुन्छ ।
प्रत्येक दिन घण्टौँ दाइ मेरो कोठामै बस्नुहुन्थ्यो । मे”रो स्त “न मु-सा-र्ने ग-र्नु-हु-न्थ्यो । कुनै दिन त यति चलाउनु हुन्थ्यो कि “म सु”-त्न स-क्दि-नथे । मेरो स्त-न-को मु-“न्टा” हरु दु-ख्ने ग-र्थ्यो अनि बढी तानिएकाले छा-ती-मा अ-स-ह्य पि-डा हुन्थ्यो ।
केटाहरु जिम गर्दा म-स-ल्स च्या-ति-ए-को झै मेरो “स्त-न”-मा पनि सेता सेता रेसाहरु देखिन थाल्यो । मेरो स्त-“न-को म”स-ल्स भित्र भित्रै च्या-ति-स-के-को थियो ।
दाइको यो कु-“र्क-र्म” प्रति मैले केही बोल्न सक्दिनथे । घ-र-मा भ”न्न ड”-र लाग्थ्यो । दिदी सानै देखि मामाघरमा बसेकीले नजिकको स-म्ब-न्ध थिएन, साथीहरुसंग कुरा सेयर गर्न सक्दिनथे ।
अनि चु-प-चा-प दाइको हरेक काममा स्वी-“कृ-ती दि”-ने बाहेक १२ वर्षको मे “रो म” स्ति-ष्क-मा सकेको प्रतिवाद गर्ने बाहेक अरु उपाय थिएन । तर दाइको जो-“रज”-बर-ज-स्तीको अगाडी मेरो क-लि-ला हा-त-ले केही प्रतिवाद गर्न सक्दैनथे। म निकै अ-सा-ह्य भएकी थिए।
म रा-त भ-री रु-न्थे, कहिले घो-“प्टो प”-र्थे, कहिले उ-त्ता-नो । दाँया फर्किन्थे, बाँया फर्किन्थे, दुखाइले निन्द्रा लाग्दैनथ्यो। बिहान उठ्दा आँखाको डिल रातो भएको हुन्थ्यो। मैले स्कुल जाँदा गाजल लगाउन थाले। साथीहरु सोध्ने गर्ने, सञ्चो छैन ? म सकेको ढाँट्ने गर्थे।
बिस्तारै बानी पर्दै गयो ढाँट्ने । केही महिना बितिसकेको थियो । दाइ मे रो स्त-“न चु”-स्ने र मु-“सार्ने ग” र्नु हुन्थ्यो । मेरो स्क-“र्ट-बा”-ट हात हा-ल्ने कोसिस जारी थियो ।
तर म त्यो रो-क्थे । केही महिनामै मे “रो स्त”-न प-हिलेको भन्दा ठूलो भइसकेको थियो । छा – “तीमा टा” इ-ट देखिने स्त-“न अ” ब मोटो थ-ल-थ-ल थियो, छा-“तीबा”-ट झो-लि-न थालेको थियो ।
मेरो स्त-“न-को अ”स्व-भा-वि-क परिवर्तन देखेर ममीले मलाई “ब्रा ल” गा-उने सल्लाह दिदाँ समेत मैले उहाँलाई कोठाभित्र दा “इले मे” रो श-री-रमा-थी खे-लि-र-हेको कुरा भन्न सकिन ।
म नौ कक्षामा पुगे । मेरो ड्याडीको कामको कारण हामी अर्कै जिल्लामा बसोबास गर्न पुग्यौ। नयाँ स्कुल, नयाँ साथीहरु, अनि नयाँ ठाउँले मेरो मन केही शान्त भयो । यो एक वर्ष-“को पि”-डा र अनुभवले मेरो व्यक्तित्व र शा-री-रि-क व”ना” वट पुरै परिवर्न भएको थियो ।